Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Rowdy Frontier Airlines Rakaabka Rakaabka ayaa Duubka loogu duubay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Shirkadda diyaaradaha ee Frontier Airlines ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ninkaasi uu feer ku dhuftay hal nin oo ka mid ahaa shaqaalaha duulimaadka, isla markaana uu ku tuntay laba gabdhood oo ka mid ahaa shaqaalaha diyaaradda.
Rakaabku wuxuu bilaabay inuu gardaroodo oo asal ahaan wuxuu weeraray shaqaalaha diyaaradda labka ah.
Rakaabka aan xasiloonayn ayaa ku qaylinayay waalidkiis oo hodan ah oo haysta 2 milyan oo doolar.
Frontier ayaa ka joojisay shaqaalihii duubista duubista rakaabka kursigiisa markii ay ka dageen Miami.
Shirkadda diyaaradaha ee Frontier Airlines ayaa bilowday baaritaan ku saabsan shil diyaaradeed oo ay la socdeen rakaab aan caadaysnayn oo shaqaaluhu hoos u dhigeen.
Muuqaal laga duubay qof rakaab ah oo koontaroolkiisu ku duuban yahay kursigiisa badhtamaha duulimaadkiisa ka dib markii sida la sheegay uu feedh iyo jeex-jeex ku sameeyay shaqaalihii diyaaradda ayaa ku baahay baraha bulshada, taasina waxay ku kaliftay shirkadda in ay baadhitaan ku samayso.
Fiidiyowgu wuxuu mowjado ka kacay Talaadadii markii uu ku sii socday baraha bulshada. Muuqaalkaas, ayaa waxaa la arki karaa qof ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo ku dhejinaya qof rakaab ah kursigooda, xitaa cajaladdii ayuu afka saaray, halka kuwo kale oo diyaaradda saarnaa ay faraxsan yihiin.
Frontier Airlines ayaa soo saartay bayaan ku saabsan dhacdada, oo lagu eedeeyay in ninkaasi uu feer ku dhuftay hal nin oo ka mid ahaa shaqaalaha duulimaadka isla markaana uu ku tuntay laba gabdhood oo ka mid ahaa shaqaalaha diyaaradda.
“Intii lagu jiray duulimaadkii Philadelphia ilaa Miami 31 -kii Luulyo, qof rakaab ah ayaa xiriir jidheed oo aan habboonayn la yeeshay shaqaale diyaarad ka dibna wuxuu jir ahaan u weeraray shaqaale kale oo duulimaad ah, ”ayaa lagu yiri war -saxaafadeedka shirkadda. "Sidaas darteed, rakaabku wuxuu u baahday in la xakameeyo ilaa duulimaadku ka dego Miami oo ay fuliyaan sharciga."
Rakaabka, Maxwell Berry, ayaa waxaa xiray booliiska Miami waxaana uu wajahayaa saddex dacwadood oo batari ah.
Berry, oo 22 jir ah, ayaa la sheegay inuu koob ku caday dhabarka shaqaalaha diyaaradda oo markii dambe ka soo baxay musqusha isagoo aan shaadh lahayn, una baahan shaqaalaha inay u helaan shaar cusub oo ku jira boorsooyinkiisa. Berry ayaa markii dambe garaacay laba xabbadood oo dumar ah oo kalkaaliyeyaasha ka mid ahaa, wejigana feedh kaga dhuftay nin shaqaale u ahaa duulimaadka, sida ay booliisku sheegeen.
Muuqaalladaas ayaa si deg deg ah oo ballaaran loogu faafiyay baraha bulshada, iyadoo ay yar yihiin dadka u naxariista rakaabka la xanibay.
Fiidiyow gooni ah oo la sheegay inuu ku jiro Berry, wuxuu ku qaylinayaa waalidkiis inay hodan yihiin oo ay haystaan ​​2 milyan oo doolar.
In kasta oo ay dadwaynuhu taageereen shaqaalaha duulimaadka, Frontier waxay ka joojisay hawlihii duulimaadka ilaa baaritaan buuxa laga samayn doono.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay noqon doonaan, sida looga baahdo duruufahaas oo kale, inay ka nasan doonaan duullimaadka inta laga dhammaystirayo baadhitaanka dhacdooyinka, ”ayay tidhi shirkaddu.